आशिन मियाँ : शैक्षिक क्षेत्रका संवाहक – Chitwan Post
आशिन मियाँ : शैक्षिक क्षेत्रका संवाहक
राणा शासनको अँध्यारो युगमा जन्मेर र उज्यालो छर्दै नेपालीहरुलाई राणा कर्तुतविरूद्ध सङ्घर्ष गर्न परोक्ष रुपले प्रेरित गर्ने जयपृथ्वीबहादुर सिंह नेपाल र नेपालीका लागि शिक्षाका ज्योति हुन् । न्याय र प्रजातन्त्रका हिमायती हुन् अनि सगरमाथा मन भएका युगपुरूष हुन् । सामन्ती संस्कार भए पनि जनताकै सुखमा खुशी हुने अलौकिक महापुरूष हुन् । उनीजस्ता सर्वस्व जनतालाई सुम्पने मानिस युगमै दुर्लभ हुन्छन् । त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा दुर्लभ मानिसको जन्म सप्तरी जिल्लाले गरेको छ । उनी हुन्– सप्तरी, राजविराज–२ निवासी ६४ वर्षीय आशिन मियाँ ।
‘मेरो प्रत्येक श्वासमा नेपाली सुवास छ । मेरो नसानसामा स्वाभिमानी खुन दगुरिरहेको छ । मेरो आस्था र विश्वासले आजको युगलाई झलमल पार्नेछ । मैले भोगेको दुर्दिन यस पिँढीले भोग्न नपरोस् भन्ने दृढ चाहना छ । कर्ममा विश्वस्त छु । म मैले सुरूवात गरेको शिक्षामन्दिरलाई उच्च मावि नबनाई अल्लाहको प्यारो बन्दिनँ । मैले जे कुरामा आजसम्म विश्वास गरेँ, त्यो कहिल्यै विफल भएको छैन । पत्यार पनि छ, कसैलाई अपत्यार पनि छ । कतै कसैको मजबुत हात छ, कतै सराहना गर्नलायक साथ छ । म एक्लो छैन, १४७ जना बच्चाहरु मेरो अभियानमा पंक्तिबद्ध छन् । तिनीहरु मार्फत नै म ज्ञानको उज्यालो छर्दै बाँचेको छु ।’
आशिन मियाँका यी अभिव्यक्ति सुन्दा उनी आफ्नो लगानी र अगुवाइमा बनेको मदरसा आशिनियाँ दारूल उलुम राजविराज–२, चनौरा नामक शिक्षा मन्दिरमार्फत ज्ञानको उज्यालो छर्दै उज्यालो समाज निर्माणमा कटिबद्ध छन् । जयपृथ्वीले राणा शासक चन्द्रशमशेरबाट तिरस्कार पाएझैँ मियाँले पनि कतिपय विद्वान् कहलिएका महापुरूषबाट अविश्वास पाएका छन् । त्यसबाट हत्तोत्साही भएर हैन, खबरदारी सम्झेर अझ दृढताका साथ कर्मपथमा एकोहोरिएका छन् ।
आफ्नो जीवनबारे मियाँ भन्छन्– ‘सातमास मात्रै पुगेर जन्मेका मेरा पिताजी दुःखन मियाँ परिवारको एक्लो सदस्य हुनुहुँदो रहेछ । ‘एकटा बेटा के बेटा आ एकटा टका के टका’ भनेर साराले हजुरआमालाई अर्को विवाह गर्न उक्साएछन् । पिता गर्भमै छँदा हजुरबुबा अल्लाहकहाँ स्याहाश्रेस्ता बुझाउन निस्कनुभएकाले अर्को सन्तानको कुनै गुन्जाइस थिएन । अर्को विवाहपश्चात् मात्र अरु सन्तान हुन सक्ने अवस्था थियो । हाम्री हजुरआमाको अल्लाहप्रतिको अटल विश्वासका अगाडि समय पनि झुकेछ । यही एक छोराबाट म घरभरि सन्तान भएको हेरेर मात्र मर्छु भन्ने कुरामा उहाँ विश्वस्त हुनुभएछ । नभन्दै ठेलिया गाविस, गोरपारमा काकाकाकीको संरक्षणमा रहनुभएकी हाम्री माताजी भदलोसँग उहाँले विवाह गर्नुभएछ ।
जेठो सन्तानका रुपमा म वि.सं. २००६ सालमा जन्मेँ । म पछि ३ भाइ र ३ बहिनीले पनि जन्म लिए । घरभरि सन्तान हुँदा हजुरआमाको सपना र जपना त पूरा भयो, तर आर्थिक दुरवस्थाले हाम्रो परिवारलाई नराम्ररी गाँज्यो । उमेर पुगेपछि गाउँकै मदरसामा मौलवी (शिक्षक) राखेर पढ्न थालेँ । पछि विवाद भएकोले मौलवी उठेर गयो, अनि म चनौरा पडरिया निमाविमा पढ्न थालेँ । पछि के.अ. स्कुलमा कक्षा ६ उत्तीर्ण गरी राम्रो पढाइको अपेक्षा लिएर पविमाविमा भर्ना भएँ । परशुराम हेडसरको नेतृत्वमा त्यो स्कुलको पढाइ ज्यादै राम्रो थियो । आर्थिक कठिनाइका बाबजुद कोदाको रोटी खाएर र टेर्निङ्गको हाफ सर्ट–पेन्ट लगाएरै भए पनि कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेँ । भाइबहिनीको लालनपोषणमा ध्यान पु¥याउन बाध्य हुनुभएकाले मातापिताले मेरो पढाइमा लगानी गर्न सक्नुभएन । पढाइलाई अधुरो छाडेर म सलाई कारखानामा मजदुरी गर्न थालेँ । त्यसले पनि नपुगेर मिल मजदुर भएँ, पछि खलासी भएँ । गुरूजी कहलाउन पनि सफल भएँ । ट्याक्टर, ट्रक, दिवाबस हुँदै मेरो गुरूजीको कर्म नाइट बसचालकसम्म पुग्यो । जाँड–रक्सी नखाने र होसियारीका साथ गाडी हाँक्ने मेरो बानी थियो । त्यसैले म चालक भएको गाडीमा नै यात्रुहरु यात्रा गर्न रूचाउँथे । म पनि सबैसँग विश्वासिलो व्यवहार गर्थें । सबैको प्रेम पाएको आभाष हुन्थ्यो । मैले रोजगारी भेटेको थिएँ भने गाडी मालिकहरुले पनि मेरो कार्यकालमा प्रशस्त मुनाफा आर्जन गरेका थिए । म कसैसँग निउँ खोज्दिनथेँ, तर कतिपय मालिकहरुका नजरमा म प्रतिकूल पात्र ठहरिन पुगेको पनि छु । त्यसैले, मैले गाडी चेन्ज गरिरहनु परेको तीतो अनुभव छ । म जहाँ पुग्थेँ, सबैको भलो हुन्थ्यो ।
मैले जागिर छाड्न विवश भएपछि भने मालिकहरुको जययात्रामा विराम लागेको पाएको छु । म लोलोपोतो गरेर मालिक रिझाउने पात्र नभई स्वाभिमानी शिर उच्च पारिरहने नेपाली मुसलमानको बच्चो भएकाले म कसैले दबाउँदैमा दबिन मान्दिनथेँ । जीवनको उतारचढावलाई मैले सहर्ष पचाउँदै दुई–चार पैसा कमाउँदै गएँ । अल्छी कुन चराको नाम हो भन्ने मलाई थाहा थिएन । गरिबीको रापले सेकिएर मलाई इस्पात बनाएको थियो । म कर्मद्वारा नौलो संसार रचना गर्न चाहन्थेँ । दु.खको स्वाद चाखिसकेकाले सुखको सुवास लिन रूचाउँथेँ । सबै खाले चाहना पूरा हुन सम्भव पनि छैन । धर्मपत्नीलाई पित्तमा पत्थरी भएको थाहा पाएपछि म साह्रै विचलित भएँ । पत्नीविनाको जीवनको कल्पना नै गर्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ । बनेपा हस्पिटलमा पत्थरीको इलाज हुन्छ भन्ने थाहा भएपछि अलिक प्राण आयो । आफूले पाउने नौ हजार तलब मालिकसँग मागेँ । उनले आलटाल गरे, दिन मानेनन् । बीस हजार जुटाउनु थियो । मेरो लागि महासागर तर्नुझैँ गाह्रो भयो । त्यसबेला आवेगमा आएर मैले मालिकलाई भनेको थिएँ– ‘हेर्नुस् मालिक ! तपाईंको कारणले मेरी पत्नीको ज्यान तल–माथि भयो भने म गाडीसहित त्रिशूलीमा आत्मदाह गर्दिन्छु । उनीबिनाको जीवन मैले कल्पना गरेको छैन ।’ आवेशमा जे भने पनि जीवनका लागि जुध्नु नै थियो, जुधेँ र जितेँ पनि । पत्नीलाई मृत्युको मुखबाट बचाएँ, तर जागिर चट भयो । सुखमा हाईहाई, दुःखमा बाईबाई गर्ने मालिकहरुको रवैयाबाट वाक्कदिक्क भएँ ।
केही दिनपछि माँ कंकालिनी नाइट बसमा जागिर भेटेँ । आम्दानीको ढोका पुनः खुल्यो । सुरूआतका दिनमा ठिकै थियो, पछि चालकहरुकै चुक्लीमा फस्न पुगेँ । यस मियाँलाई धपाउनुपर्छ भनेर कतिपय चालकले खलासीसँग मिलेर मेरा विरूद्धमा कुरा लगाएछन् । पछि कुरा बुझ्दा थाहा पाइयो । न्युट्रलमा गाडी चलाउँदा रहेछन् र तेल कम खाँदो रहेछ । बदलामा प्रत्येक दिन दुई सय भत्ता पाउँदा रहेछन् । मलाई खलासीले आइडिया सुनायो । मैले पनि ओरालोमा त्यही विधि लागू गरेँ । काठमाडौँ–राजविराज आवतजावत गर्दा सबैभन्दा कम तेल मैले हाँकेको गाडीले नै खाएको देखियो । त्यसदिनको अनुभवले म आत्तिएको थिएँ । मालिकबाट दुई सय बक्सिस त पाएँ, तर त्यो पैसा मैले समाइनँ । आफ्नो र यात्रुको जीवन हत्केलामा राखेर दुई सयको प्रलोभनमा फस्नु उचित लागेन । गाडीको इन्जिन पनि थोत्रिने र दुर्घटनामा समेत परिने सम्भावना वताएर मालिकलाई सतर्क पार्न खोजेँ । ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भनेझैँ मालिक मेरा कुरामा विश्वस्त हुन सकेनन् । फलस्वरुप मैले जागिरबाट हातै धुनुप¥यो । जसो गरे पनि धोकाबाहेक अर्थोक भेटिनँ ।
मैले जागिर त्यागेको एक हप्ता नबित्दै मुग्लिन क्षेत्रमा गाडी दुर्घटना परेर झा थरका चालक ठहरै भए । मनमा विरक्तता छायो । त्यसपछि एक दिन म मुस्लिम धर्मको इस्तमा (प्रवचन) सुन्न गएँ । मैले जीवन जिउने नौलो उपाय थाहा पाएँ । मान्छे मरेर केही लिएर जाँदैन । मात्र आफ्नो इमान, आफ्नो धर्म, अल्लाहको भक्ति लिएर जान्छ । भैँसी बेचेर खर्च जुटाई चार महिने इस्लाम ज्ञान सिकाइ मार्गमा होमिएँ । चार महिनामा धेरै ज्ञान सिकेँ । त्यसपछि मान्छे गुडाउने चालक नबन्ने निर्णयमा पुगेँ । चराचर जगत्को चालक नै साथमा भएपछि किन चालक बन्नुप¥यो र ! इज्जत दिने, दिलाउने, जियाउने, पिलाउने, बचाउने, हँसाउने, रूवाउने एकमात्र चालक अल्लाहको शरणमा पुगेपछि उनैले हरअसम्भवलाई सम्भव पारिदिन्छन् भनेर भक्तिमार्गमा एकोहोरिएँ । भगवान्सँग बिन्ती गरेँ– मलाई आफ्नो घर मक्कामा बोलाएर हज गराई आफ्नै काम गर्न फर्काऊ । नभन्दै धर्मपत्नीका साथ हज गर्ने सौभाग्य मिल्यो ।
हज गरेपछि भने हलाल–हराम छुट्याउने, मानव–पशु भेद पर्गेल्ने दिमाग शिक्षाले मात्र दिन्छ भन्ने ठानेँ र आफ्नै निजी लगानीमा वि.सं. २०६६ सालमा सरकारी स्कुल खोलेँ– मदरसा आशिनियाँ दारूल उलुम राजविराज–२, चनौरा । सरकारीस्तरबाट शिक्षक व्यवस्थापनका लागि एक लाख अठसठ्ठी हजार वर्षको प्राप्त हुन्छ । त्यसमै केही रकम थपेर तीन शिक्षक र एक पियनलाई जागिर दिलाएको छु । त्यसमा उर्दू र फारसी १००÷१०० पूर्णाङ्कको समेत पढाइ हुन्छ । अहिले रातोदिन विद्यालयको पछि लागेको छु । जिशिका सप्तरीले ट्वाइलेट बनाउने खर्च दियो । दुई कोठे ट्वाइलेट निर्माण गरेको छु । विद्यार्थीहरुको चापलाई ख्याल गर्दै नयाँ पक्की भवन बनाइरहेको छु । अल्लाहले साथ दिएर सुविस्तै राखेमा यस मदरसा आशिनियाँ दारूल उलुम स्कुललाई उच्च मावि बनाउने धोको छ । अहिले विद्यालयको नाममा दुई कठ्ठा आधा धुर जग्गा छ, पछि आवश्यकता परेमा अरु थप्नेछु । बाँचुन्जेल विद्यालय विकासमा समर्पित हुने र मरेपछि पनि विद्यालय सेरोफेरोमा नै समाधीस्त हुने इच्छा छ । कब्र (चिहान) का लागि स्थानसमेत चुन्ने इच्छा छ । मेरी धर्मपत्नी हाजी सगिरा मियाइन र म हाजी आशिन मियाँ दुवैको कब्र विद्यालय सेरोफेरोमा हुनेछ । बाँचुन्जेल विद्यालयका पछि छौँ, मरेपछि पनि यसका छेवैमा रहने परम इच्छा छ । यो सङ्कल्पलाई औपचारिक रुप दिन भने दिइएको छैन । चाँडै घरसल्लाहमार्फत औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्नेछौँ । विद्यालय भवन, फर्निचर, बाटोघाटो, पुस्तक, पोशाक आदि क्षेत्रको व्यवस्थापनमा कमी छ । विद्यार्थी चापलाई समेट्न जनशक्ति व्यवस्थापनमा अभाव छ । मैले थालेको शिक्षाको यस जागरणलाई सफल पार्न हिन्दू–मुस्लिम–बौद्ध–क्रिस्चियन आदि सबै समुदायलाई हात र साथ दिन अनुरोध गर्दछु । सबै वर्ग÷समुदाय अट्न सक्ने र अटिरहेको पवित्र थलोका रुपमा विकास गरिरहेको छु । यसलाई हुर्काउन÷फुलाउन हार्दिक आह्वान् गर्दै आफ्ना भनाइलाई विश्राम दिन रूचाउँछु ।’
सेतै फुलेको वयोवृद्ध काया लिएर आशिन मियाँ लोकोपकारी कार्यमा जुट्छन् । नेपाली मुसलमान भन्न रूचाउने उनी मैथिली कला–संस्कृति र भाषा–भेषभूषामा गर्व गर्दछन् । मैथिलीभाषीप्रेमी मात्र नभई उनी मैथिली जनजागरण मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत हुन् । आफ्नै बलबुताले खुलेको नजिकको विद्यालयका विद्यार्थीलाई नास्ता खुवाउन प्रत्येक शुक्रबार आफैँ जुट्छन् । आफ्नो आम्दानीको केही अंश दीनहीन असहाय बालबालिका, वृद्धवृद्धाका लागि समर्पण गर्नु आफ्नो सनातन धर्म ठान्दछन् । रातोदिन कर्मपथमा सरिक भइरहने मियाँ मुखले भन्नुभन्दा बढी कार्य गरेर देखाइदिन्छन् । मियाँ थप्छन्– ‘हामी मिले स्वर्गीय सुख कसैले छिन्न सक्दैन । हामी नाडी हौँ, काम गर्ने थरीथरीका औँला छन् । ती औँला दर्बिला हुन नाडी दह्रो हुुनुपर्छ । व्यक्तिभन्दा माथि उठेर समाजको सर्वाङ्गीण पक्षलाई नियाल्ने हो भने हामी सगरमाथाझैं अग्लिन सक्छौँ । ईश्वर–अल्लाह आफ्ना ठाउँमा छन् । मानव कल्याणको धर्म गर्नु नै ईश्वर–अल्लाह प्राप्तिको श्रेष्ठ उपाय हो । हामी जतासुकै भौँतारिए पनि गन्तव्यको राजमार्ग एकै छ । संसारको यस सृष्टिको एक उदाहरण बन्न मान्छे आतुर हुनुपर्छ । यसका लागि लोकोपकारी कार्यमा समय र साधन लगाउनुपर्छ । हाम्रो सानो योगदानले अरुले प्रोत्साहन भेट्छन् भने किन हामी नजुट्ने !’
फूलको दर्शन : हामी हाँसे संसार हाँस्छ